Neodymium Igwe Ọdụdọ, Efere Igwe Ọdụdọ, Alnico Igwe Ọdụdọ - General Magnetik
Countersink Igwe Ọdụdọ
Magnetik Assemblies = Cup nju
Efere Igwe Ọdụdọ
Multipole Igwe Ọdụdọ
Ruber Igwe Ọdụdọ
Mbukota esereese nke NdFeB
Company otu ngosi
Ojiji ojiji nke ngwaahịa Ojiji ojiji nke ngwaahịa
efe n'elu igwe
maglev ụgbọ okporo
Ningbo Hehai Electric Co., Ltd (General Magnetik) bụ magnet emeputa.
Anyị na-elekwasị anya na nju na anyị bụ oké soplaya na omenala nju
Nju na-ọtụtụ-eji sensọ, akpakanamde Motors, electric ugbo ala, ngwá electronic, wdg
Anyị uru bụ na ike omenala nju n'ichepụta. Elu àgwà na uko ndidi nju.
Ele ỌZỌ >>
NdFeB akụrụngwa = magnetik Chuck
Ezigbo Enyi China ga-CNY ememe si Jan.20, 2020 ka Feb.01, 2020, ndị kasị omenala Chinese Ememme Afọ Ọhụrụ Ememe! Wubàtá na-arụ ọrụ na Feb.03, 2020, ma ọ bụrụ na ị chọrọ gị na iji nnyefe tupu CNY, iji ga-enịm ọ dịkarịa ala tupu Dec.10, 2019. ejikari December bụ ọnwa o ...
Magnetik Materials Market - Global Indust ...
Magnetik ihe ndị akpọkwa na nonwe magnetik Njirimara ma ọ bụ nwere ike magnetized. Dabere na ha Njirimara na end-ojiji, ndị a ihe nwere ike nkewa dị ka na-adịgide adịgide ma ọ bụ ruo nwa oge. Dị iche iche nke magnetik ihe ndị dị ka na-adụ, ike na ọkara ike na-eji na magnetik mater ...
© Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara.
Apụta Products , Sitemap , Mobile Site , Ajụjụ
Alnico Ring Magnet, Custom Magnet, Bar Magnet, elu okpomọkụ Igwe Ọdụdọ , Neodymium Igwe Ọdụdọ, Alnico Pot Magnet,